Dubbii WBO Gujii |
Note: The Abbooti Gadaa should never take side, but stand for the truth. It is better they expose the manipulation of the Abbooti Gadaa of Gujii’s decision by the mafia group of PM Abiy Ahmed. The group, specifically known as the ATM, is giving telephone calls to individual homes and promises a plot of land for every one and money to gain support. The group’s full engagement is working against WBO and ABO, day and night. The Gujii people including the Abbooti Gadaa have been supporting, WBO, their children. The support is perpetual. Doesn’t the ATM have other work?
For every one who comes home from abroad, the ATM goes to the airport and greets her or him with hotel and other accommodations. For example, when Gelasa Dilbo and his company arrived, when artist Suleyman arrived at the airport and many more individuals, were promised with whatever they demanded. It is despicable if these new arrivals are giving in to this mafia group for money and land, not principle.
The following is an explanation against false propaganda orchestrated by the ATM group abusing the decision of Abbooti Gadaa of Gujii
Dhimma tibba kana miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jiruun “ajajaan WBO Gujii Lixaatti mootummaa waliin wal ta’uun dhukaasa dhaabe” kan jedhu deemaa jira.
Ajajaan Zoonii Kibbaa jaal Gammachuu Abbooyyee fi jaal Goollicha Dheengee jedhamu. Isaan kun “WBOn lola dhaabe” hin jenne. Akka miidiyaa hawaasaa kanarraa argaa jirrutti ajajaan WBO Gujii kun nama Eeliyaas Gambeellaa jedhamudha. Garuu namni kun ajajaa WBO Gujii miti.
Eeliyaas Gambeellaa erga WBO ganee waggaan tokko dhumeera. Gara jalqabaa ajaja hoggana waraanaatiin saglii tokko waliin bobba’ee ture. Bobba’ee dirqama itti kenname dhiisuun waraana mootummaa WBO lolaa jiru waliin hariiroo uumuu eegale. Gochaan isaa kun waan irratti barameef dirqama itti kenname dhiisee meeshaa Waraanaa fudhatee bade. Erga sanaa qunnamtii Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hin qabu. Namni kun maqaa “deeggarsa WBO” jedhuun maallaqa uummatarraa walitti qabaa ture. Maallaqa gara 134000 (kuma dhibba tokkoof kuma soddomii afur) fudhachuun uummata dhokate. Uummanni qabeenya ofii maqaa WBO’tiin baase kanaaf Eeliyaasiin barbaadaa ture. Boodarra mootummaatti madaqee da’annoo tolfate. Meeshaa Waraanaa fudhatee bade san gurguratee mootummaatti harka kennatee ture. Boodarra erga mootummaa waliin wal ta’ee booda akka ajajaa WBOtti of waamuun holola maqa balleessii qindeessuutti ka’e.
Namni Eeliyaas jedhamu kun gochoota badaa Waraana Bilisummaa Oromoo keessatti agarsiisuufi naamusa waraanaa cabsuu isaatiin hogganni WBO Zoonii Kibbaa qoqqobbii irra kaa’eera. Naamusa cabsuu isaa hogganni WBO erga hubatee “tarkaanfii narratti fudhatu” jedhee waan yaadeef uummata keessa socho’ee badii adda addaa dalagaa ture. Godina Gujii Lixaafi Bahaa keessa socho’uun badiiwwan adda addaa dalagee jeequmsa ka’uuf bu’uura ta’aa ture. Akkasumas maqaa WBO’tiin waan socho’uuf akka uummanniifi WBOn wal shakkan (akka uummanni WBO shakku) taasisaa ture. Yeroo adda addaatti badiisaa kanarraa akka deebi’u gorsamus deebi’uu hin dandeenye.
Eeliyaas miseensa KFO ture. Yeroo miseensa KFO ture sanas yeroo adda addaatti ganaa akka ture ni beekama. Bara 2016 mormiin uummataa jabaachaa wayita dhufe ofumaa sodaachuun “nan hidhama; nan du’a” jedhee yaadda’uurraan of baraaruuf WBOtti makame. WBO dawoo godhate malee jaallatee, itti amanee dirree hin deemne.
Akka odeeffannoo keenyaatti, Eeliyaas waliin kan jiru namni tokko dhukkubsataa kan ture mana yaalaa baatii 4 kan ture isa waliin akka jiru dhageenye.
Dhimma marii Abbootii Gadaa Gujiifi WBO Zoonii Kibbaa
Abbootiin Gadaa Gujii uummata bal’aa waamuun marii taasisanii turan. Marii kanarraa miseensonni WBO qooda fudhataniiru. Marii kanarratti WBOn kaayyoo ABOfi akeeka WBO uummataaf sirnaan ibsaniiru. Dhimma waliigaltee ABO fi Mootummaa Itoophiyaa irratti ibsa WBO irraa kennameen mootummaan akka waliigaltee araaraa kana cabsee waraana labsaa jiru ibsan. Nageenya kana tasgabbeessuu keessatti qooda dursaa kan qabu mootummaa ta’uu ibsameera. Waraanni Bilisummaa Oromoo ammoo lola mootummaan Itoophiyaa WBOfi uummata Oromoo irratti labse kana ofirraa qolachuuf mirga akka qabuufi dirqamasaa akka ta’e uummataaf ibseera.
Yaada Abbootiin Gadaa Gujii dhimma hidhannoofi lolaa ilaalchisuun WBOf dhiyeessan ilaalchisee Waraanni Bilisummaa Oromoo walga’ii kanarratti argaman murtoo hidhannoo keenyaa kan murteessu nu miseensa WBO utuu hin taane, hoggana waliigalaa ABOti jechuun yaada kennan. Mariin waa’ee WBO hoggana ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka ta’e akeekan.
Abbootiin Gadaa gara higgana ABO deemuun akka mari’ataniifi dhimma waliigaltee ABO fi Mootummaa Itoophiyaa isaanirraa akka dhaga’anillee ibsanii, WBOn dhimma kanarratti homaa murteessuu akka hin dandeenye himan. Yaada WBO irraa dhiyaate kana uummanni fudhatee addaan galan.
Dhimmi irratti waliif galame inni tokko WBOn dhimma hidhannoo irratti murteessuu akka hin dandeenye; ammoo dhimmi haala kanaan (haala mootummaan deemaa jiruun) hidhannoo hiikkachuu akka hin yaadamneefi fudhatama kan hin qabne ta’uu WBOn erga uummataaf ibsee booda uummanni yaadicha fudhateera.
Inni biraan kan irratti waliif galame, WBOn daandii aspaaltii irratti dhukaasuu akka hin qabne yaada Abbootiin Gadaa Gujii dhiyeessan WBOn fudhatee daandiirratti ba’ee lola akka hin banne.
As irratti waraanni mootummaa Itoophiyaa daandiirraa goree WBO kan adamsu taanaan ofirraa ittisuu akka qaban uummataaf ibsan. Kanas Abbootiin Gadaa Gujii fudhataniiru.
Murtoo Abbootiin Gadaa Gujii dhimma WBO ilaalchisuun dabarsan “uummanni kanaa booda yoo WBOn hidhannoon kan socho’u ta’ee uummanni deeggarsa akka hin goone” kan jedhu ilaalchisee
Murtoon Abbootiin Gadaa Gujii dhimma WBO ilaalchisuun dabarsan uummanni WBOf ammaa booda deeggarsa akka hin goone kan jedhu kijiba akka ta’eefi murtoon akkanaa hin dabarre. Uummanni Oromoo Gujii yoo mootummaan Itoophiyaa lola kan WBO irratti banu ta’e uummanni dursee ofirraa loluuf qophii akka ta’etu mullata.
Gamtaa Barattoota Amboo !
Maqaa Gadaa tiin Abbootii Gadaa Harki caalli Kan Opdon Jala kaatanii Mootummaa nu irra bulchi.Nu mootummaa jala nu bulchi.Jedhanii Durgoo fudhachaa akka turan ni yaadatama.
Waggoota 27 guutuu Yaroo Oromoon shiftoota EPRDF tiin Dararamaa ture Guyyaa tokkitti mormanii hin beekan.Abbootii Amantaa Warri jedhamanis akkanuma jechaa turan.
Ammas Nuti waa’ee Haraara Opdo fi ABO Abbootii Gadaan yaalamaa jiru kana ,Kan shakkaa jirru Abbootiin Gadaa Sobduun aangoo hin qabne warreen durii Karaa opdo Gad bahanii Ammas nuti Abbaa Gadaa ti jechaa jiru.
Yaroo Foddaa Tv OBN irratti arginu ni rifanne.Jarreen Kun garuu Qeerroon bakka hundaa Akka Waltajjii ummataa irraa hariyatanii turanii dha.
Kan Isaan irratti hirmaachaa turan Waltajjii dhoksaa kan kabiinoota opdo qofa irratti dhokatanii hirmaachaa jiru.
Kanaafuu Abbootii Gadaa isaan dhugaa adda bahanii otoo Haraara seena qabeessa kana irratti hirmaatanii Kan jedhu yaada qabna.
Yoo ta’uu baate opdon Qarshiin bittee ittuu akka oromoo wal hin ficcisiifne sodaa qabna.
Next articleSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Amajjii 16, 2019; BBC, VOA on Moyale